အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု အတွက် သက်မွန်မြင့် နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် ဘယ်သူ့ကို ရစေချင်လဲ - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု အတွက် သက်မွန်မြင့် နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် ဘယ်သူ့ကို ရစေချင်လဲ
အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆု အတွက် သက်မွန်မြင့် နဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည် ဘယ်သူ့ကို ရစေချင်လဲ
Apann Pyay 12:19 PM သရုပ်ဆောင်များ Edit
၂၀၁၆ခုနှစ်အတွက် မြန်မာ့ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးကတော့ ဒီ ကနေ့ မတ်လ(၁၈)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာရှင်များနဲ့ ပရိသတ်များမျှော်လင့်စောင့်စားနေတဲ့ ထူးချွန်ဆုပေးပွဲကြီးဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နီးကပ်လို့ လာပြီဖြစ်ပါပြီ။ ဒီနှစ်မှာ ဘယ်သူတွေက ပရိသတ်တွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်း အကယ်ဒမီဆုရနိုင်ပြီး ဘယ်သူတွေ အကယ်ဒမီဆုနဲ့ လွဲချော် သွားမလဲ ဆိုတာကို ရင်ခုန်စွာ စောင့်စားမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။ ဒီနှစ်မှာ သက်မွန်မြင့်နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့က ၂၀၁၆ ခုနှစ် အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုအတွက် ပရိသတ်တွေကြား ရေပန်းစားနေသူ နှစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်မှာ သက်မွန်မြင့်အနေနဲ့ “ချစ်လှစွာသောအမုန်း” ၊ “အုတ်ကြားမြက်ပေါက်”၊ “လူးရတနာသိုက်” စတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင်ထားသူ တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ “ချစ်လှစွာသောအမုန်း” ဇာတ်ကားမှာ အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုရနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သက်မွန်မြင့်ဟာ ချစ်လှစွာသောအမုန်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ မိုးစက်မေ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
“ကြီးတော်လက်ထဲမှာပဲ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသော မိတဆိုးသမီးလေးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ဖခင်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အောင့်သက်သက်နဲ့ ကြည့်နေရသူ ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ နုံအအ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ဖခင်ရဲ့ ဇနီး ကိုယ့်ရဲ့ မိထွေးနေရာကို ရောက်လာတဲ့အခါမိုးစက်မေတစ်ယောက် ဒေါသဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူမရဲ့ စိတ်ကိုထိမ်းချုပ်ပြီး မိထွေးကောင်မလေးရဲ့ အပေါ် အမုန်းတရားလည်းမရှိ မေတ္တာလည်းမပေးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ ဖခင်ရဲ့ဇာတ်ရှုပ်ကို သိချင်မှာတော့ အဲ့ဒီကောင်မလေးအပေါ် တာဝန်ယူခဲ့ရပါတယ်။
မေတ္တာဆိုတာ ရောင်ပြန်ဟပ်တဲ့ သဘောရှိတာကြောင့် မိုးစက်မေ မေတ္တာတွေ ပေးခဲ့ရတဲ့ မိထွေး ကောင်မလေးဟာ သူမှသူပဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မိုးစက်မေအတွက် ညီမလေးတစ်ယောက်သဖွယ် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ မိထွေးအပေါ် ညီမလေး တစ်ယောက်သဖွယ် မေတ္တာမျိုး မိုးစက်မေကထားခဲ့ပြီး ချစ်သူကောင်လေးကနေ မိထွေးကောင်မလေးအပေါ် ငြိတွယ်နေချိန်ကို သိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ မျိုသိပ်ခံစားရတဲ့ သူမရဲ့ ခံစားချက် အစရှိတာတွေကို အပိုအလိုမရှိ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ပရိသတ်များက သူ့ကို အဲ့ဒီဇာတ်ကားနဲ့ အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရစေချင်ကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ ဒီနှစ်ထဲမှာ ချစ်လှစွာသောအမုန်း၊ အနူးဘစ်၊ ဘန်ကောက်မှမန္တလေးသို့ စတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ပါဝင်ထားသူ ဖြစ်ပေမယ့် ပရိသတ်တွေကတော့ အမုန်း ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ချစ်လှစွာသောအမုန်းဇာတ်ကားကြီးမှာ အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်ဆုကို ရစေချင်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီဇာတ်ကားမှာ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ဟာ အမုန်းဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အမုန်းဟာ ဆွေမျိုးတွေဆီ ကပ်နေ ခိုင်းသမျှလုပ် ကျွေးတာစားဘဝနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူ တစ်ဦဖြစ်ပြီး အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့ ထမင်းဆိုင်မှာ အောက်ခြေသိမ်းလုပ်ရင်း အဒေါ့် ယောကျာ်းရဲ့ သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူတစ်ဦးက ခြေတော်တင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ မိုးသည်းတဲ့ ညတစ်ညမှာ ဘဝပျက်ခဲ့ရတဲ့ သူမအတွက် မိုးသည်းညတွေဟာ သူမအတွက် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ညတွေ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
သူမကို ခြေတော်တင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားဦးလေးဆီ အဒေါ်တွေက ငွေနဲ့အလဲအလှယ်ပြုခဲ့တာကြောင့် အမုန်းဟာ ဦးနောက်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဦးရဲ့ မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပြီး လိုက်ခဲ့ရသူ အမုန်းအဖို့ ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးသူ ဦးရဲ့ သမီးနဲ့ ဆုံခဲ့ရပါတယ်။ ဦးရဲ့သမီးအပေါ်မှာ အားကျစိတ် အားကိုးစိတ် တွယ်တာစိတ်တွေရှိခဲ့တဲ့ အမုန်းကတော့ မမမှ မမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အမအရင်းသဖွယ် ဦးရဲ့သမီးကို ချစ်ခဲ့ပေမယ့် မမဆီက မေတ္တာကတော့ မရရှာပါဘူး။
နောက်ပိုင်းမှာ မမရဲ့ သူငယ်ချင်း ချစ်သူလို့ ပြောလို့ရတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ သူမဆုံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ဘဝမှာ ဘယ်သူမှမရှိတာကြောင့် မမနဲ့ ပတ်သက်သူ ကောင်လေးကို သူမ ခင်တွယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘဝနာခဲ့ရသူ အမုန်းလေး အဖို့ လင်ပါသမီးကို အမအရင်းလို ချစ်ခင်၊ မမဖြစ်သူနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သူစိမ်းကောင်းလေးအပေါ် စွဲလမ်းတွဲတာမှုတွေနဲ့ သူယုံကြည်စွာနဲ့ လိုက်လာခဲ့တဲ့ ဦးရဲ့လှည့်ကွက်တွေကြားမှာ ခါးစည်းခံရသူ အမုန်း နုံအအကောင်မလေးဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းစွဲ အမုန်းတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
သူတို့နှစ်ဦးစလုံး အပြိုင်သရုပ်ဆောင်တဲ့ “ချစ်လှစွာသောအမုန်း” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းရိုက်ကူးထားပြီး သရုပ်ဆောင် ဇင်ဝိုင်း၊ အောင်ရဲလင်း၊ သက်မွန်မြင့်နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်တို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ မင်းသမီးနှစ်ယောက် ပါဝင်တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေကတော့ တစ်ယောက်က ဇာတ်ဆောင် တစ်ယောက်က ဇာတ်ပို့လို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကတော့ နှစ်ယောက်စလုံးကို ဇာတ်ဆောင်ဆုနဲ့ အကယ်ဒမီစာရင်းမှာ တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရော အဲဒီဇာတ်ကားတွေကို ကြည့်ပြီးသွားပြီလား? သက်မွန်မြင့်နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည် ဘယ်သူက အကယ်ဒမီ ဆုရမယ် ထင်လဲ။ ဘယ်ဇာတ်ကားနဲ့ ရမယ်ထင်ပါသလဲ။
၂၀၁၆ခုနှဈအတှကျ မွနျမာ့ရုပျရှငျထူးခြှနျဆုပေးပှဲကွီးကတော့ ဒီ ကနေ့ မတျလ(၁၈)ရကျနမှေ့ာ ကငျြးပတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာရှငျမြားနဲ့ ပရိသတျမြားမြှျောလငျ့စောငျ့စားနတေဲ့ ထူးခြှနျဆုပေးပှဲကွီးဟာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ နီးကပျလို့ လာပွီဖွဈပါပွီ။ ဒီနှဈမှာ ဘယျသူတှကေ ပရိသတျတှေ မြှျောလငျ့ထားတဲ့ အတိုငျး အကယျဒမီဆုရနိုငျပွီး ဘယျသူတှေ အကယျဒမီဆုနဲ့ လှဲခြျော သှားမလဲ ဆိုတာကို ရငျခုနျစှာ စောငျ့စားမွငျတှရေ့တော့မှာပါ။ ဒီနှဈမှာ သကျမှနျမွငျ့နဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျတို့က ၂၀၁၆ ခုနှဈ အမြိုးသမီးဇာတျဆောငျဆုအတှကျ ပရိသတျတှကွေား ရပေနျးစားနသေူ နှဈဦးဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈမှာ သကျမှနျမွငျ့အနနေဲ့ “ခဈြလှစှာသောအမုနျး” ၊ “အုတျကွားမွကျပေါကျ”၊ “လူးရတနာသိုကျ” စတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှမှော ပါဝငျထားသူ တဈဦးဖွဈပမေယျ့ ပရိသတျတှကေတော့ “ခဈြလှစှာသောအမုနျး” ဇာတျကားမှာ အမြိုးသမီး ဇာတျဆောငျဆုရနိုငျတယျလို့ ခနျ့မှနျးထားသူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သကျမှနျမွငျ့ဟာ ခဈြလှစှာသောအမုနျး ရုပျရှငျဇာတျကားမှာ မိုးစကျမေ ဇာတျရုပျနဲ့ ပရိသတျတှကေို ဖမျးစားနိုငျခဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
“ကွီးတျောလကျထဲမှာပဲ ကွီးပွငျးလာခဲ့ရသော မိတဆိုးသမီးလေးတဈဦးဖွဈပွီး ဖခငျရဲ့ လုပျရပျတှကေို အောငျ့သကျသကျနဲ့ ကွညျ့နရေသူ ကိုယျ့ထကျငယျတဲ့ နုံအအ ကောငျမလေးတဈယောကျကို ဖခငျရဲ့ ဇနီး ကိုယျ့ရဲ့ မိထှေးနရောကို ရောကျလာတဲ့အခါမိုးစကျမတေဈယောကျ ဒေါသဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သူမရဲ့ စိတျကိုထိမျးခြုပျပွီး မိထှေးကောငျမလေးရဲ့ အပျေါ အမုနျးတရားလညျးမရှိ မတ်ေတာလညျးမပေးနိုငျခဲ့ပမေဲ့ ဖခငျရဲ့ဇာတျရှုပျကို သိခငျြမှာတော့ အဲ့ဒီကောငျမလေးအပျေါ တာဝနျယူခဲ့ရပါတယျ။
မတ်ေတာဆိုတာ ရောငျပွနျဟပျတဲ့ သဘောရှိတာကွောငျ့ မိုးစကျမေ မတ်ေတာတှေ ပေးခဲ့ရတဲ့ မိထှေး ကောငျမလေးဟာ သူမှသူပဲ ဖွဈခဲ့ပွီး မိုးစကျမအေတှကျ ညီမလေးတဈယောကျသဖှယျ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။ မိထှေးအပျေါ ညီမလေး တဈယောကျသဖှယျ မတ်ေတာမြိုး မိုးစကျမကေထားခဲ့ပွီး ခဈြသူကောငျလေးကနေ မိထှေးကောငျမလေးအပျေါ ငွိတှယျနခြေိနျကို သိလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့ မြိုသိပျခံစားရတဲ့ သူမရဲ့ ခံစားခကျြ အစရှိတာတှကေို အပိုအလိုမရှိ ဇာတျရုပျနဲ့ ကှကျတိဖွဈအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့သူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ပရိသတျမြားက သူ့ကို အဲ့ဒီဇာတျကားနဲ့ အမြိုးသမီး ဇာတျဆောငျဆုကို ရစခေငျြကွတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဝတျမှုနျရှရေညျဟာ ဒီနှဈထဲမှာ ခဈြလှစှာသောအမုနျး၊ အနူးဘဈ၊ ဘနျကောကျမှမန်တလေးသို့ စတဲ့ရုပျရှငျဇာတျကားတှထေဲမှာ ပါဝငျထားသူ ဖွဈပမေယျ့ ပရိသတျတှကေတော့ အမုနျး ဇာတျရုပျနဲ့ ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ ခဈြလှစှာသောအမုနျးဇာတျကားကွီးမှာ အမြိုးသမီး ဇာတျဆောငျဆုကို ရစခေငျြကွပါတယျ။ အဲ့ဒီဇာတျကားမှာ ဝတျမှုနျရှရေညျဟာ အမုနျးဆိုတဲ့ ဇာတျရုပျနဲ့ ပရိသတျတှကေို ဖမျးစားနိုငျခဲ့သူ တဈဦးဖွဈပါတယျ။
အမုနျးဟာ ဆှမြေိုးတှဆေီ ကပျနေ ခိုငျးသမြှလုပျ ကြှေးတာစားဘဝနဲ့ ကွီးပွငျးလာခဲ့ရသူ တဈဦဖွဈပွီး အဒျေါဖွဈသူရဲ့ ထမငျးဆိုငျမှာ အောကျခွသေိမျးလုပျရငျး အဒေျါ့ ယောကျြားရဲ့ သူငယျခငျြး ဖွဈသူတဈဦးက ခွတေျောတငျခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ။ မိုးသညျးတဲ့ ညတဈညမှာ ဘဝပကျြခဲ့ရတဲ့ သူမအတှကျ မိုးသညျးညတှဟော သူမအတှကျ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ညတှေ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
သူမကို ခွတေျောတငျခဲ့တဲ့ အမြိုးသားဦးလေးဆီ အဒျေါတှကေ ငှနေဲ့အလဲအလှယျပွုခဲ့တာကွောငျ့ အမုနျးဟာ ဦးနောကျလိုကျခဲ့ရပါတယျ။ ဦးရဲ့ မကျြနှာ တဈရှာထငျပွီး လိုကျခဲ့ရသူ အမုနျးအဖို့ ကိုယျ့ထကျအသကျကွီးသူ ဦးရဲ့ သမီးနဲ့ ဆုံခဲ့ရပါတယျ။ ဦးရဲ့သမီးအပျေါမှာ အားကစြိတျ အားကိုးစိတျ တှယျတာစိတျတှရှေိခဲ့တဲ့ အမုနျးကတော့ မမမှ မမဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ကိုယျ့ရဲ့ အမအရငျးသဖှယျ ဦးရဲ့သမီးကို ခဈြခဲ့ပမေယျ့ မမဆီက မတ်ေတာကတော့ မရရှာပါဘူး။
နောကျပိုငျးမှာ မမရဲ့ သူငယျခငျြး ခဈြသူလို့ ပွောလို့ရတဲ့ ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့ သူမဆုံခဲ့ရပါတယျ။ သူ့ဘဝမှာ ဘယျသူမှမရှိတာကွောငျ့ မမနဲ့ ပတျသကျသူ ကောငျလေးကို သူမ ခငျတှယျခဲ့ပါတယျ။ ဘဝနာခဲ့ရသူ အမုနျးလေး အဖို့ လငျပါသမီးကို အမအရငျးလို ခဈြခငျ၊ မမဖွဈသူနဲ့ ပတျသကျတဲ့ သူစိမျးကောငျးလေးအပျေါ စှဲလမျးတှဲတာမှုတှနေဲ့ သူယုံကွညျစှာနဲ့ လိုကျလာခဲ့တဲ့ ဦးရဲ့လှညျ့ကှကျတှကွေားမှာ ခါးစညျးခံရသူ အမုနျး နုံအအကောငျမလေးဇာတျရုပျကို ပီပွငျစှာ သရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အသညျးစှဲ အမုနျးတဈယောကျ ဖွဈခဲ့ရပါတယျ။
သူတို့နှဈဦးစလုံး အပွိုငျသရုပျဆောငျတဲ့ “ခဈြလှစှာသောအမုနျး” ဆိုတဲ့ ဇာတျကားဟာ ဒါရိုကျတာ ဝိုငျးရိုကျကူးထားပွီး သရုပျဆောငျ ဇငျဝိုငျး၊ အောငျရဲလငျး၊ သကျမှနျမွငျ့နဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျတို့က အဓိက ပါဝငျသရုပျဆောငျထားတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ မငျးသမီးနှဈယောကျ ပါဝငျတာဖွဈပွီး ပရိသတျတှကေတော့ တဈယောကျက ဇာတျဆောငျ တဈယောကျက ဇာတျပို့လို့ ထငျခဲ့ပမေယျ့ ရုပျရှငျထုတျလုပျရေးကတော့ နှဈယောကျစလုံးကို ဇာတျဆောငျဆုနဲ့ အကယျဒမီစာရငျးမှာ တငျထားတာဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှရေော အဲဒီဇာတျကားတှကေို ကွညျ့ပွီးသှားပွီလား? သကျမှနျမွငျ့နဲ့ ဝတျမှုနျရှရေညျ ဘယျသူက အကယျဒမီ ဆုရမယျ ထငျလဲ။ ဘယျဇာတျကားနဲ့ ရမယျထငျပါသလဲ။